यी लक्षण भए ढुक्क हुनुहोस् तपाइँलाई उनले माया गर्छिन् – Jagaran Nepal
यी लक्षण भए ढुक्क हुनुहोस् तपाइँलाई उनले माया गर्छिन्
भनिन्छ, महिलालाई चिन्नु असम्भव जस्तै कुरा हो। महिलाका सबै लक्षण तथा प्रतिक्रियाहरु अविश्वसनीय तथा दुर्वोध्य हुन्छन्, जसलाई खुट्याउनै सकिन्न भन्छन् मनोविज्ञहरु । त्यसोभए महिलाको भावनालाई कसरी बुझ्ने त ? कोही युवतीले आफुलाई मन पराइरहेको छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ? मनोविज्ञहरुका अनुसार यस्ता केही लक्षणहरु छन् जसका आधारमा महिला आफुप्रति नतमस्तक भएको कुरा पुरुषले ठम्याउन सक्छन्।
ती ११ लक्षण यसप्रकार छन् :
१. तुरुन्त प्रतिक्रिया : कुने युवतीले यदि तपाइँको मोबाइल म्यासेज, इमेल, टि्वट तथा फेसबुक म्यासेजको तत्कालै जवाफ दिन्छिन् । तपाइँको फोन कललाई बेवास्ता गर्दिनन् र फोन उठाउन नपाएमा माफी माग्दै लामो म्यासेज पठाउँछिन् भने बुझ्नुहोस् तपाइँले उनको मन पगालिसक्नुभएको छ ।
२. यदि उनले कोही निकै राम्रो मान्छेसँग तपाइँलाई तुलना गर्छिन् भने वा कुनै असल मान्छेसँग तुलना गर्दै त्यो मान्छे ठ्याक्कै तपाइँजस्तै छ भन्ने गर्छिन् भने ढुक्क हुनुहोस्, तपाइँ उनको मनमा बसिसक्नुभएको छ।
३.यदि कुनै युवतीले तपाइँलाई मन पराइन् भने त्यो उनका साथीहरुलाई थाहा हुन्छ । त्यसपछि ती युवतीका साथीहरुले पनि तपाइँलाई साथी बनाउन थाल्छन्, भेटेर होस् वा सोसल साइट मार्फत होस् । तर उनले आफ्ना केटी साथीहरुलाई तपाइँसँग पाँच मिनेटभन्दा बढि कुरा गर्न भने दिनेछैनिन् । उनका साथीहरु आफुसँग नजिकिए भने बुझ्नुहोस् की तपाइँलाई उनले मन पराइसकिछिन् ।
४.चाहे तपाइँ कुनै रेष्टुरेन्टमा बसिरहेका होस् वा बाटोमा हिँडिरहेको होस् उनी तपाइँसँग निकै नजिक आउँछिन् र हात वा जिउ समाउन खोज्छिन् ।
५.मध्य दिन होस् वा मध्यरात । खाए पिएको समय जे होस् । यदि तपाइँले फोन गर्नुभयो भने उनले जवाफ दिइहाल्छिन्। उनी भोलि बिहान छिट्टै नउठी नहुने छ तर पनि रातभर तपाइँसँग फोनमा कुरा गर्न तयार हुन्छिन् भने त्यसले संकेत गर्छ की तपाइँलाई उनले माया गर्छिन् ।
६. उनले तपाइँका भूपु प्रेमिकाहरुका बारेमा हरेक कुरा जान्न चाहन्छिन् । जसका कारण उनले तपाइँका मनपसन्द कुराहरु थाहा पाउन सकुन् । तर उनले ती भुपु प्रेमिकाहरुको बद्ख्वाइँ गरिरहन्छिन् । उनीहरुको बारेमा कुरा झिकिरहन्छिन् र भन्छिन्, ‘उनीहरुलाई छाड्नाले तपाइँको जिवन राम्रो भयो ।’
७. तपाइँको जन्मदिन होस्, तपाइँका बुवा आमाको विवाहको एनिभर्सरी वा जागिरमा पदोन्नती तपाइँलाई भन्दा उनलाई बढि चासो तथा खुसी हुन्छ । तपाइँको खुसीमा उनी कति धेरै खुसी हुन्छिन् भन्ने कुरा उनले सधै देखाउन चाहन्छिन् ।
८. तपाइँ तनाव तथा चिन्तामा हुनुहुन्छ । दिनभर नै तपाइँलाई दिक्क लागिरहेको छ भनेपनि तपाइँको मुहारमा खुसी भर्नका लागि उनी जे सुकै गर्न तयार हुन्छिन् । तपाइँ ठीक नभएसम्म उनले आराम लिँदिनन् ।
९.यदि तपाइँले उनीसँग भेट्ने योजना बनाउनुभयो भने उनले तपाइँ भेट्ने भनेको ठाउँमा आउनुहुन्छ की नाइ भन्ने कुराको एकिन गर्न तिन पटक सम्म जाँच गर्छिन् । पाँच मिनेट अगाडि मात्र भेट्ने कुरा थाहा भएमा पनि उनले सबै कुराको टुंगो गरि सकेसम्म राम्रो ड्रेसमा सजिएर आउँछिन । तपाइँलाई खुसी पार्न उनले ड्रेसमा कुनै कम्प्रोमाइज गर्दिनन्।
१०. यदि तपाइँले अरु कुनै केटीलाई इंगित गर्दै त्यो केटी राम्री छे भन्नुभयो भने उनको अनुहार तत्कालै अमिलो हुन्छ। उनले त्यसपछि तपाइँलाई लेक्चर सुनाउन थाल्छिन्। एक घण्टा नै किन नलागोस् विभिन्न उदाहरण तथा दृष्टान्त दिएर तपाइँले राम्रो भनेको केटी यस अर्थमा खराब छ भन्ने पुष्टि गरेरै छाडि्छन्।
११. उनले तपाइँले भनेका हरेक कुरालाई ध्यान दिएर सुन्ने मात्र होइन तपाइँले उनीसँग गरेका साना भन्दा साना कुराको वृतान्त पनि याद गर्छिन्। चाहे तपाइँले मदिराको नशामा मद्यरातमा उनीसँग टेलिफोनमा गरेको जन्मदिनको उपहार बारेको कुरा किन नहोस्।